Umkhiqizi nomhlinzeki waseChina TY320-3 Shehwa
I-TY320-3 bulldozer imisiwe okwesikhashana, ukudluliswa kwe-hydraulic, uhlobo lwe-hydraulic track track bulldozer. Ukudluliswa kweplanethi, ukuhanjiswa kwamandla okusetshenziswa yi-Unilever. Uhlelo lokusebenza olwenzelwe ngokuya ngobunjiniyela bomuntu nomshini lwenza ukusebenza kube lula, kahle nangokunemba.
I-TY320-3 bulldozer imisiwe okwesikhashana, ukudluliswa kwe-hydraulic, uhlobo lwe-hydraulic track track bulldozer. Ukudluliswa kweplanethi, ukuhanjiswa kwamandla okusetshenziswa yi-Unilever. Uhlelo lokusebenza olwenzelwe ngokuya ngobunjiniyela bomuntu nomshini lwenza ukusebenza kube lula, kahle nangokunemba. Amandla aqinile, ukusebenza okuhle kakhulu, ukusebenza kahle okuphezulu nokubukwa okubanzi kubonisa izici zenzuzo. Okuzikhethela kufaka i-U-blade, i-shank ripper emithathu, i-ROPS nezinye izinto zokusebenza. Kungukukhetha kwakho okuhle ekwakheni umgwaqo, ukwakhiwa kukagesi kagesi, ukuguqulwa kwensimu, ukwakhiwa kwamachweba, ukuthuthukiswa kwezimayini nokunye ukwakhiwa.
Isisindo sokusebenza (Kg): 34000
Isisindo sokusebenza (Ngesipelephuli) (Kg): 38500
Ukucindezela komhlaba (kufaka phakathi i-ripper) (KPa): 0.094
I-gauge yethrekhi (mm): 2140
Ubuncane. imvume yomhlaba (mm): 500
I-Dozing Dimension (mm): 41301590
Amandla we-dozing (m): 9.2
UMax. ukumba ukujula (mm): 560
Ubukhulu bebonke (mm): 688041303640
Amandla we-Flywheel (KW): 239
NdikindikiI-er of cylinders-borestroke (mm): 6-139.7152.4
Indlela yokuqala: Ugesi uqala u-24V 11kW
I-Sprocket: Ihlukaniswe izingxenye
Ithrekhi ukungezwani: umfutholuketshezi kushintshiwe
Ithrekhi yomkhondo (mm): 228.6
Emuva (Km / h) 0-4.4 0-7.8 0-13.5
UMax. ingcindezi yesistimu (MPa): 13.7
Okukhipha uhleloL / min: 335
Ukudluliswa: Amaplanethi, i-multiple-disc clutch, i-hydraulic actuated, i-lubrication ephoqelelwe ngepompo yamagiye, izivinini ezi-3 eziya phambili nezivinini ezi-3 ezihlehlisayo.
Steering bamba: Wet, Multiple disc bamba, Spring ukulayishwa, umfutholuketshezi Actuated.
Braking bamba: Wet, band wazihlephula, eziqhutshwa booster wokubacindezela futhi interlocking wokubacindezela.
Idrayivu yokugcina: Spur gear, ukunciphisa kabili, ukusakaza i-lubrication.
Langaphambilini I-TY230-3 Bulldozer
Olandelayo: Isikhasi esihlukanisiwe se-SWMC-360-DTH sigibele indawo yokubhoboza umgodi phansi